एक भारतीय ट्याग गरिएको "स्वास्थ्य र प्रशिक्षण" को समाचार ब्लग - THE INDIAN FACE
ध्यान र खेल मा mindfulness को शक्ति
चिन्ता, तनाव र बेवास्ता कारकहरु हुन सक्छन् कि हाम्रो जीवन को गुणस्तर लाई प्रभावित गर्न को लागी यो साकार बिना। कहिलेकाहीँ हामी यहाँ शरीर मा छौं, तर हाम्रो दिमाग भूत वा भविष्य मा छ। यसैले हाम्रो आजको लेख मा, लेटिसिया मोन्टोया, खेल मनोवैज्ञानिक, को अभ्यास को महत्व बताउँछन् Mindfulness खेल संगै यदि हामी हाम्रो प्रदर्शन लाई अधिकतम गर्न चाहन्छौं।
शारीरिक स्तरमा आफैंलाई कन्डिसन नगरी खेल खेल्ने अभ्यास पनि एक राम्रो उपकरण हो बल र यदि छैन भने, टीम वर्क मार्फत व्यक्तिगत रूपमा मान। यो हप्ता लेटिसिया मोन्टोया, खेल मनोवैज्ञानिक, हामीलाई यस विषयमा सबै विवरण सिकाउँछ। के तपाइँ यसलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
खेलकुद चोटहरू संयोगले हुँदैन। वास्तवमा, को खेल घाइते तपाईं जिम्मेवार हुनुहुन्छ। के यो तपाईलाई अनौंठो लाग्छ? त्यहाँ एक मौन दुश्मन छ जसले ख्याल राख्दछ ताकि ती घाइतेहरू अधिक प्रवण र हुन्छन्। यदि हामी जान्न चाहन्छौं कि हामी केबारे कुरा गर्दैछौं भने रहनुहोस् किनभने यो लेख तपाईंलाई रूची दिन्छ! लेटिसिया मोन्टोया, हाम्रो खेल मनोवैज्ञानिक, हामीलाई सबै विवरण बताउँछ।
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि एक जना खेलाडीले जनताले बढावा दिंदा वा प्रोत्साहित गर्दा के महसुस गर्नुपर्छ? यदि हामी आफैंलाई तिनीहरूको स्थितिमा राख्छौं भने, हामी घबराहटदेखि उत्साहका लागि सबै कुरा कल्पना गर्न सक्दछौं। तर तपाईको लागि यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न को निम्ति कोसँग छ लेटिसिया मोन्टोया, खेल मनोवैज्ञानिक, जसले तपाईंलाई खेलमा जनतामा पार्ने असरको बारेमा सबै विवरणहरू दिन्छ। के तपाइँ यसलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
भावनात्मक व्यवस्थापन र हाम्रो कल्याण र खेल प्रदर्शनमा यसको प्रभाव
खेल र भावनात्मक बुद्धिमत्ता? दुबै पक्षहरूलाई मिलाउनुहोस् र तपाईंको खेल प्रदर्शन अधिक र अधिक प्रभावी बनाउनुहोस्। आज हाम्रो लेखमा, लेटिसिया मोन्टोया, एक खेल मनोवैज्ञानिक, हामीलाई भावनात्मक व्यवस्थापन बारे तपाइँले थाहा पाउनु पर्ने कुरा बताउँदछ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र यसले हामी मध्ये जो खेल गर्छौं तिनीहरूको प्रदर्शनलाई कसरी असर गर्छ।
तपाईंको वर्कआउट पछि रिकभरीको लागि साल्मनको साथ4व्यंजनहरू।
तपाइँको तालिका पूरक जब यो एक स्वस्थ आहार संग खेल आउँछ! यही कारणले गर्दा आज हाम्रो लेखमा हामी तपाईंमा चार स्वादिष्ट व्यंजनहरू ल्याउँछौं सामन, नीलो माछाले हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै फाइदाहरू ल्याउँछ र खेल खेल पछि रिकभरीको लागि उत्तम हो।
योगका फाइदाहरू र यसलाई अभ्यास गर्नका लागि सबैभन्दा अविश्वसनीय ठाउँहरू!
योग एक अभ्यास हो जुन शरीर र दिमागलाई एक महत्त्वपूर्ण सन्तुलनको लागि जोड्दछ जसमा तपाईं आफैं र आफु वरपरका मानिसहरूसँग शान्तिमा रहनुहुन्छ। योगका फाइदाहरू स्पष्ट छन् र देख्न सकिन्छ। हामी तपाईंलाई तल उनीहरूको बारेमा बताउँछौं र हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं कि तपाईं कहाँ जानुहुन्छ यदि तपाईंलाई योगी वापसीमा भाग्नु आवश्यक छ भने!
कसरी चालू सुरू गर्ने
स्क्र्याचबाट सुरू गर्नु जहिले पनि एक ठूलो चुनौती र गाह्रो निर्णय हो। पक्कै पनि तपाईं जस्तै चीजहरू सोचिरहनुभएको छ ... कसरी सुरू गर्न सुरू गर्ने? म यो गर्न सक्षम हुनेछ? मैले यो गर्नु पर्छ? In The Indian Face हामी जहिले पनि तपाईलाई आफुलाई भरोसा गर्न आमन्त्रित गर्दछौं र तपाईको स्वास्थ्य र सबै भन्दा माथि कल्याणको प्राथमिकता दिन्छौं। Sजारी राख्नुहोस् र नयाँ विचारहरू, ट्रिकहरू र वर्कआउटहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंलाई भोलि भाग्नको लागि जान चाहन्छ।
फ्रेरीडका लागि ट्रेन! स्की मौसम को लागी सबै भन्दा राम्रो शारीरिक प्रदर्शन!
को लागी तयार छ स्की मौसम? फ्रिराइडिंग माग गर्दैछ, यसमा कुनै श doubt्का छैन! दुबै उनीहरूको आरोहण र मूल चरणहरूमा, सवारसँग तिनीहरूको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्षम हुन इष्टतम शारीरिक अवस्थाको श्रृंखला हुनुपर्छ। कुनै श doubt्का बिना यो तपाइँको नवीकरण गर्ने समय हो स्की चश्मा र कार्यको लागि तयार हुनुहोस्! पढ्नुहोस् र तपाईंको फ्रिराइड प्रविधिको कसरी सुधार गर्ने भनेर फेला पार्नुहोस्।
पहाडहरूको लागि आफ्नो शरीर व्यायाम गर्न ways तरिकाहरू
अगस्ट 17, 2020
यी work workouts को साथ राम्रो पर्वतारोहण हुनुहोस्! यो आवश्यक छ हिमालहरूको लागि हाम्रो शरीरलाई प्रशिक्षण दिनुहोस् यदि हामी पर्वतारोहण, ट्रेकिंग वा पैदल यात्रा अभ्यास गर्छौं। यी सुझावहरू पालना गर्नुहोस् र सही दिशामा प्रशिक्षण द्वारा प्रत्येक दिन एक राम्रो एथलीट बन्नुहोस्!
S वर्कआउटहरूको साथ तपाईंको सर्फलाई बढाउनुहोस्
याद गर्नुहोस् कि अभ्यास शिक्षक द्वारा गरिन्छ, र व्यायाम पनि! तपाईंको शरीरलाई प्रशिक्षण दिंदा र तपाईंको सर्फिंग टेक्निकलाई सुधार गर्दा हामी दिमागमा राख्नको लागि हामी तपाईंलाई उत्कृष्ट--चरण दिनचर्या राख्छौं।
पर्वतारोहीहरूको लागि आर्म प्रशिक्षण
यदि तपाईं नियमित रूपमा यो नियमित तालिका अनुसरण गर्नुहुन्छ (सबै सावधानीहरू अपनाउँदै) यो पर्वतारोहण हातहरू र फिर्ता लिन तपाईंलाई धेरै नै आवश्यक हुन्छ यो राम्रो हुनेछ।
सुत्नु भन्दा पहिले शारीरिक दिनचर्या अभ्यास
जिम बिना? समस्या छैन! यदि तपाईंसँग दिनको अभ्यास गर्न समय छैन भने, राती सुत्नु अघि यो साधारण तालिका अनुसरण गर्नुहोस्।
अफिस सिन्ड्रोमबाट कसरी बच्न सकिन्छ
जुन 05, 2020
तथाकथित अफिस सिन्ड्रोम कम्प्युटरको अगाडि बसेको केहि घण्टा पछि देखा पर्दछ। धेरै व्यक्तिहरू जसले लेख्ने, डिजाईन गर्ने वा एडभेन्चर फोटोग्राफहरू सम्पादन गर्ने - र अन्य गतिविधिहरू - उनीहरूले आफ्नो कम्प्युटरको अगाडि बिताएको समयलाई ध्यान नदिन सक्छन्। यसले कसरी तपाईंको शरीरलाई असर गर्न सक्दछ र कसरी यसलाई बेवास्ता गर्ने फेला पार्नुहोस्!
ग्रील्ड नार्वेजियन सामन एक धेरै स्वस्थ नुस्खा
साल्मन विश्वभरि खपत हुने नीलो माछा मध्ये एक भएको छ। यसको उत्तम स्वादका लागि मात्र होईन, तर यसको पोषण सामग्रीको लागि पनि हो। थप रूपमा, यो एक खाना हो जुन धेरै तरिकामा तयार गर्न सकिन्छ किनभने यसको स्वाद धेरै खाना पकाउने तरिकामा अनुकूल गर्दछ।
गहुँको पिठो बिना स्वस्थ पेनकेक्स विधि
दलिया र बदाम पेनकेक्सका लागि यो नुस्खाको साथ स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट वा स्नैक्स बनाउनुहोस्!
धेरै व्यक्तिहरू गहुँको पीठो-आधारित भोजनले लिन सक्ने हानिकारकहरू र स्वास्थ्यमा उनीहरूको प्रभावलाई पत्ता लगाउँदै छन्, विशेष गरी जो celiac र ग्लुटेन असहिष्णु मानिसका लागि।
तपाइँको कसरत दिनचर्या सुरु गर्न १० मांसपेशिहरू तन्काउँदछ
हामी १० स्ट्रेचहरू प्रस्तुत गर्दछौं जुन तपाईंले आफ्नो व्यायाम तालिका सुरू गर्नु अघि बिर्सनु हुँदैन। यसले तपाईको मांसपेशीहरूलाई थर्काउन अघि यसलाई न्यानो पार्न मद्दत गर्दछ।
Eye सल्लाह आँखा क्यान्सर रोक्न
हामी पाँच सुझावहरू प्रस्तुत गर्दछौं जसले तपाईंलाई आँखाको क्यान्सर रोक्न मद्दत गर्दछ। हामीमाथि निर्भर छ कि उत्कृष्ट आँखा स्वास्थ्य पाउन यथासक्दो गर्न र यो र अन्य रोगहरू जसले हाम्रो आँखालाई असर गर्न सक्छ बाट जोगिन।
स्कीइ and र स्नोबोर्डि inमा चोटपटक: तिनीहरूको बारेमा जान्न यो सधैं राम्रो हुन्छ
स्कीइ and र स्नोबोर्डि inमा चोटपटक: उनीहरूलाई चिन्नु सधैं नै राम्रो छ स्की मौसमको बीचमा, तपाईं अझै भ्रमणको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ र केही दिन हिउँबाट रमाईलो गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको चीज क्लासिक स्कीइ or वा स्नोबोर्डिंग हो, आज हामी तपाईंलाई यसको बारेमा संक्षिप्त वर्णन गर्न चाहन्छौं
यस जाडोमा स्कीमा कसरी फिट हुन सकिन्छ
नोभेम्बर 21, 2014
गत हप्ता हामीले स्कीयर सुरू गर्नका लागि लेख साझा गर्ने सल्लाह प्रकाशित गर्‍यौं। आज हामी तपाइँलाई यस जाडोमा स्कीइंग गर्नुभन्दा पहिले आकारमा आउन सल्लाह दिने अभ्यासहरूको श्रृंखलाहरू ल्याउँदछौं, नोबल स्कीयरहरूको लागि र पहिले नै केही अनुभव भएका दुवैको लागि वैध। सुरु गर्नका लागि, तपाईंले सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने मांसपेशीहरू ती हुन्